Day: Mee 20, 2020
Ndị gaferela afọ iri isii na ise ga-enwe ike iji ikike ha gaa obodo ha
Minista Koca, na nkwupụta mgbe nzukọ nke ndị ọkà mmụta sayensị na-enwe nzukọ, metụtara ọnọdụ njem nke ndị gafere afọ 65. "Citizensmụ amaala anyị karịa afọ 65 ga-enwe ike ịga obodo ha ọnwa 1 na ikike." Iji okwu ahụ Koca, [More ...]
Nri Akọrọ Cat
Ndị nna ochie nke nwamba bụ ihe e kere eke bi n'ọzara. Ya mere, a zụlitere ikike ha nwere itinye uche na mmamịrị iji kpochapụ mmiri na-agabiga ma mee ka ahụ nwee ike ichekwa mmiri. Agbanyeghị, a na-ejikarị ikike a na nwamba. [More ...]
Mmetụta Covid-19 na şlọ Ọrụ Eskişehir
Na nzukọ "ụlọ ọrụ mmepụta ihe" nke Eskişehir haziri nhazi mpaghara Mpaghara Direction, a tụlere nsogbu ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ mere n'oge usoro ọrịa ọrịa coronavirus (Covid-19) na mmetụta nke nje na akụ na ụba. Ulo oru nwetara n’aka Eskişehir Organised Industrial Zone Directorate [More ...]
Obodo Samsun emeela nhazi ọhụrụ na AFAD Junction iji nyere ụmụ amaala nchekwa, nchekwa na ntụsara ahụ. Obodo Samsun, nke na-aga n’ihu n’ọrụ iji mee ka njem na-akwụsị akwụsị, Recep [More ...]
Ndi isi obodo Izmir gbara osooso maka mmeghari ohuru na mmezi ya n'ime ubochi Corona. N'ime usoro a, ndị otu mepere emepe ji ihe dị ka 418 puku tọn asphalt na narị puku klọm narị abụọ nke ihe mkpuchi n’obodo. [More ...]
Obodo Izmir nke obodo Etiti kpebiri iji nye ndị na - ahụ maka ihe mkpuchi ihe mberede ihe enyemaka mgbe ndị İzmir General Sanitary Board ji masks mee ka ọ bụrụ iwu dị na mpaghara ahụ dum. Rib na-ekesara ụmụ amaala ihe ruru nde 2,5 [More ...]
Turkey, nnukwu ọrụ na -eme mgba megide ụkọ nri na ihe mkpofu na-emejuputa atumatu. Ọrụ ugbo, site na nkwado nke United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO), "Chekwa nri, chebe tebụl gị" [More ...]
Onye Minista nke Technologylọ ọrụ na Teknụzụ Mustafa Varank kwuru na mgbake na mpaghara ahụ amalitela na akara ngosi dị mma abịawo wee kwuo, "Gbalịa, ọ ga-eme ka ụlọ ọrụ anyị na-eguzogide ụdị egwu niile ma guzo n'ọnọdụ ọ bụla. [More ...]
Mịnịsta na-ahụ maka mkpata na mmefu ego bụ Berat Albayrak kesara ozi vidiyo sitere na akaụntụ Twitter ya n'ihi ncheta ụbọchị 19 nke Atatürk, Ndị Ntorobịa na Egwuregwu. Onye ozi Albayrak, ọpụpụ nke Mustafa Kemal Atatürk gaa Samsun na akara nke mgba nke mba [More ...]
PttAVM imepe ụlọ ahịa / EPttAVM bụ ihe ịchọrọ iche maka ịre na ntuziaka e-commerce a. Companieslọ ọrụ ndị na-ere EPttAVM, nwere ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ chọọ ire ere n'ịntanetị [More ...]
Mkpebi Nchọpụta Ọzọ Maka Kanal Istanbul
Thelọ ikpe nchịkwa nke iri nke Istanbul, na akwụkwọ ikpe nke Halk Evler gbara akwụkwọ maka iwu nke Kanal Istanbul Project, na arịrịọ nke kagbuo Nleba Mgbasa Gburugburu Ebe Obibi (EIA) Ezi Ozi nke oflọ Ọrụ Na-ahụ Maka Gburugburu Ebe Obibi na Obodo [More ...]
Ngwa ka na-aga n’ihu maka nde ndị na-emepe ngwanrọ 1 Ndị chọrọ imeziwanye onwe ha n’ihe gbasara sọftụwia na mpaghara ọha na nkeonwe nwere ike itinye akwụkwọ maka ‘1 nde ngwanrọ mmezi’ na ntanetị. A na-enye 1 nde ọzụzụ site na BTK Academy [More ...]
Ọnye na-bụ İlber Ortaylı?
Na Mee 21, 1947, a mụrụ ezinụlọ Crimea na Bregenz, Austria. Ọ kwagara Turkey na ezinụlọ ya mgbe ọ dị afọ abụọ. Ọ gụchara ụlọ akwụkwọ praịmarị ya sekọndịrị na sekọndrị na Istanbul Austrian High School. [More ...]
Njikọ nke Eskişehir na Port
Onye isi oche nke OSkişehir OSB, Nadir Küpeli kwuru na ha na-atụ anya ime ihe n’ịrụ ụzọ okporo ụzọ ụgbọ elu asaa dị n’etiti Hasanbey Logistics Center na OSB nke TCDD. Küpeli dị ezigbo mkpa maka ụlọ ọrụ Eskişehir [More ...]
Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi, Cevahir Street, a ga-emechi emechi ụzọ ụgbọ n'ime oke nke ọrụ ihe owuwu nke ılọ Mkpuchi Darıca Gebze Metro. A GA-EKWU EGO EGO EGO NA-EBIRI EGO EGO [More ...]
Na Izmir, mkpebi nke Kọmitii Na-ahụ Maka Ahụike Ọchịchị mere ka ọ dị mkpa iji masks na mpaghara 30 na obodo niile. Nkwupụta nke gọọmentị Izmir kwuru, "Boardlọ Ọrụ Nchebe Obodo Anyị, Nọ 1593" Iwu Ahụike Ọha. [More ...]
Ilısu Dam Providemeri Inye 2,8 Lira na aku na uba
Turbine nke 1 nke Ilısu Dam Power Plant batara ọrụ na ememe nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan gara site na nnọkọ vidiyo. Onye Minista oru ugbo na oke ohia Onye Minista Ike na eke akụ na Bekir Pakdemirli [More ...]
Akwukwo akwukwo nke nyocha nke LGS
A na-ebipụta akwụkwọ nta nke abụọ Sample Ajụjụ LGS; Mịnịsta na-ahụ maka agụmakwụkwọ nke mba bụ Ziya Sel thatuk kwuru na nkwupụta maka ụmụ akwụkwọ na-akwado maka Ule Nleta Highlọ Akwụkwọ sekọndrị, akwụkwọ nyocha abụọ nke May [More ...]
Nrọ nke afọ 70 nke Turkey na Ilisu Dam Ikpughere
Onye Minista oru ugbo na oke ohia Bekir Pakdemirli, onye kachasị ike nke Turkey bụ otu n'ime Ilisu Dam oru ngo a na-etinye n'ọrụ mbụ n'ime turbines isii a haziri maka ya kwuru n'ememe ahụ: "Mmiri maara mba anyị dị nsọ. [More ...]
Nkwado ọrụ nke ụdị dị iche iche na mmemme nkwado Turquality mezue
Minista ahia Ruhsar Pekcan kwuputara na ọrụ ndị a rụrụ iji kwado ụdịrị ọrụ ahụ na "Usoro Nkwado Turquality" maka ngalaba ọrụ yana usoro dabere na "ebumnuche ebumnuche", kwuru, "brandị ọrụ anyị na ngalaba ọrụ [More ...]